कार्बाइड हालेर पकाएका आँप नखाऔ
फलको राजा मानिने आँपको सिजन सुरु हुन आटेको छ । आँप पाक्ने मुख्य सिजन आउनु निकै अगाडी देखि नै बजारमा हेर्दै खाउँखाउँ लाग्ने पहेलपुर आँप देखिन थालिसकेको छ । प्राकृतिक रुपमा पाक्दा अमृत समान फाइदाकर आँप कतै हानीकारक कार्बाइड हालेर पकाएको त हैन ? किन्नु भन्दा अगाडी सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
आँप म्याङगिफेरा वर्गमा पर्ने तथा उष्ण हावापानी भएको स्थानमा हुर्कने एक प्रकारको गुलियो तथा अमिलो फल हो । वैज्ञानिक वर्गीकरणमा वनस्पतिजगतको ऐनाकाडिर्येसी वर्गमा पर्ने आँपको स्वाद काचोमा अमिलो र पाकेपछि गुलियो हुन्छ । फलको राजाभनेर चिनिने आँप नेपालमा तराई देखि पहाड सम्मनै हुन्छ । गुणकारी भए कैले होला पुर्वीयशास्त्रमा आँपलाई अमृत फल समेत भनिएको छ ।
आँपबाट हामीले प्राप्तगर्ने पौष्टिक तत्व आँपको प्रजाति, उत्पादनस्थलको हावापानी, आँपको पाकेकोपना र पकाइएको तरिका, उपभोग गर्ने तरिका आदिमा निर्भर हुन्छ । पाकेको आँपमा प्रोटिन, चिनीजन्य पदार्थ, खनिजपदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फास्फोरस, फलाम, भिटामिन ”ए”, ”सी” र ”बी”लगायत पोषक तत्व पाइन्छ । यसमा पाइने चिनीजन्य पदार्थ आँपको खान योग्य खण्डको ६ देखि १७ प्रतिशतसम्म हुन्छ । यसमा टार्टरिक, साइट्रिक र मेलिकअम्ल समेत पाइन्छ । यी अम्लहरु शरीरमा क्षरीय सञ्चय कायम राख्नमा सहयोगी हुन्छन् । आँपमा प्रोटिन औसत ९.६, बोसो औसत ०.१, खनिजपदार्थ औसत ०.३, रेसा औसत १.१, फास्फोरस औसत ०.०२ र फलाम औसत ०.३ प्रतिशत पाइन्छ । आँपको प्रति सयग्राममा औसत ऊर्जा करिब ९० किलो क्यालोरीसम्म हुन्छ ।
आँप खानुका अनेक स्वास्थ्यबर्धक फाइदा छन् । टेक्सास एग्रिलाइफ रिसर्च सेन्टरकाखाद्य वैज्ञानिकहरुले आँफ्नो अनुसन्धानमा आँपलाई अन्यफलहरुको दाजोमा स्तन क्यान्सरबाट बचाउ गर्नमा बढी फाइदाकारी मानेका छन् । यो एन्टीअक्सिडेन्टको पनि मुख्य श्रोत हो । जसले शरीरमा कोषको क्षयिकरण रोक्छ र शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउछ । आँपलाई छालाको चाउरीपन रोक्न समेत प्रभावकारी मानिन्छ । आँपमा पोटासियम, म्याग्नेसियम तथा कपर जस्ता खनिजका लवण पाइन्छ । साथै क्वारसिटिन, बिटाक्यारोटिन र एस्ट्राग्यालिन जस्ता शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषकतत्वहरु पनि आँपमा पाइन्छन् ।
आँपको नियमित उपभोगले हृदय सम्बन्धि रोग, छिटै बुढ्यौली देखिने समस्या, क्यान्सरजस्ता स्वास्थ्य समस्याकमगर्न सहयोग पुग्छ । आँपमा घुलनशील फाइबर पाइन्छ जसले रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा कम गर्ने र ग्रन्थीमा हुने क्यान्सरबाट समेत बचाउछ । अपच तथा अम्लीयपना जस्ता समस्या हटाउन पनि आँपको सेवन लाभदायक हुन्छ । रक्तअल्पता भएका विरामीहरुले आँप खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
गर्भवती महिलाहरुका लागि आँप निकै फाइदाजनक मानिन्छ । आँपमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पनि पाइने हुँदा रक्तअल्पताभएकाहरुकालागिफाइदाकर हुन्छ । आँपमा भिटामिन बी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जसले मस्तिष्कको कार्यप्रणालीलाई दुरुस्त बनाउँछ र स्मरण शक्तिपनि बढाउँछ । शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि आँपफलदायी हुन्छ । पाकेको आँपमा भिटामिन ए प्रसस्त पाइने भएकाले यो आँखाको लागि समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ । आँपमा भिटामिन इ समेत पाइन्छ जसले गर्दा यौन क्षमता बढाउन समेत आँपको सेवन उपयोगी हुन्छ ।
आयुर्वेदले पनि पाकेको आँपगुलियो, वीर्य बढाउने, पौष्टिक, वायु नाशक, शरीरको कान्ति बढाउने, शीतल, पित्तनाशी, भोक बढाउने भनेको पाइन्छ । यसले मुटुलाई बलियो बनाउनुको साथै पित्तलाई समेत फाइदा गर्दछ ।
आँप र कार्बाइड
प्रायः आँप, केरा, मेवा, अम्बा जस्ता फल नपाक्दै छिपिएपछि टिपिन्छ र यसरी काँचै टिपिने फल टिपिसकेपछि आँफै पाक्छन् । यस्ता फलमा प्राकृतिक रुपमै हुने एथिलिनग्यासले फललाई बिस्तारै पकाउँछ । कहिलेकाही यी फललाई छिटै पकाउनुपर्दा कपडा, बोरा, भुस आदिमा गुम्स्याइन्छ, जसले गर्दा एथिलिन ग्यास हावामा फैलिएर जान पाउँदैन र चाँडै पाक्छ ।
तर, आजकाल प्राकृतिक तवरले पकाउँदा अमृतजस्तो हुने आँप कार्बाइडजस्ता अखाद्य रसायन हालि पकाएर बिष बनाइन्छ । कार्बाइड हालेर पकाइएको फलफूलका धेरै नकारात्मक स्वास्थ्य असर हुन्छन । क्याल्सियम कार्बाइडले पकाएको फलफुल खाँदा पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने जस्ता सामान्य समस्यादेखि फोक्सो, मुटु, मिर्गौलाको स्वाथ्यमा समेत घातक असर पर्छ । गर्भवति महिलाले कार्बाइड धेरै सेवनगर्दा गर्भ तुहिने र क्यान्सरसमेत हुने संभावना हुने क्यानेडियन वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ३५ प्रतिशत कार्बाइड भएको हावामा २५ सेकेन्ड मात्र बस्दा पनि असर देखाउँछ । एक मिनेट बस्दा संक्रमण गर्छ भने ५ मिनेट बस्दा बेहोस बनाउछ र मृत्यु पनि हुनसक्छ । कार्बाइडले पानीसंग प्रतिक्रिया गरि एसिटिलिन ग्यास बनाउँछ । जसले गर्दा मस्तिष्कमा अक्सिजनको मात्रामा असन्तुलन हुन जान्छ । मस्तिष्कमा अक्सिजनको मात्राको कमि हुँदा टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो देखिने, रिँगटा लाग्ने, बोली लर्बराउने, सास फेर्न समस्या हुनेजस्ता असर देखिन्छन् । कार्बाइड धेरै मात्रामा खाँदा यसले आँखा पोल्ने, पाक्ने गराउनुका साथै अन्धो पनि बनाउन सक्छ ।
कार्बाइड हालेर पकाइएका फलफूल आँखैले चिन्न त सजिलो छैन । तर केहि हदसम्म चिन्न आँप, केरा, अंगुरजस्ता फलफुल भेट्नामा अप्राकृतिक कालो दाग छ भने त्यसले कार्बाइड हालेको संकेत दिन्छ । हेर्दा पहेलो, खाउँखाउँलाग्ने फलफूलपनि छुदा साह्रो र कमबासनादार हुन्छन् । त्यसको कारण पनि कार्बाइड हुनसक्छ । सकेसम्म कार्बाइड हालेका खानेकुराबाट टाढै रहनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बाध्यतावश खानैपर्ने भएपनि बोक्रा ताछेर मात्र खानुपर्छ । सम्भव भएसम्म काचै आँपकिन्ने र आँफैले कार्वाइड नहाली प्राकृतिक रुप मै पाक्न दिएर खाने हो भने यसको असरबाट बच्न सकिन्छ ।
विभिन्न तथ्यांक हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकका बजारमा यस्ता रसायनको प्रयोेग गरी पकाइएका फलफुल बढी पाइन्छ । स्वास्थ्यमा धेरै नराम्रो असर पार्ने भएकाले विश्वका धेरैजसो देशमा क्याल्सियकार्बाइड हालेर पकाइएका फलफूल कडा प्रतिबन्धित छन् । कतिपय देशमा कार्वाइड तोकिएको मात्रामा हालेर फलफूल पकाउन पाइने र निर्धारित मापदण्डभित्र रहेर बेच्न पाइने कानुन पनि छन ।
नेपालको खाद्यनियमावलिको नियम न. १९ (घ) मा स्पष्ट रुपमा कार्बाइड ग्यासले कृत्रिम रूपबाट पकाइएका फलफूल बिक्रीगर्न नपाइने भनिएको छ । अर्थात, नेपालको खाद्य ऐनले यसरी कृतिम रुपमा पकाइएका आँपजस्ता फलफुल बजारमा वेच्न प्रतिबन्धित गरेको छ । तर प्रभावकारी कार्यन्वयनको अभावमा यो प्रावधान कागज मै सीमित छ ।
[email protected] (लेखक पाेषणविद् हुन् )